အိုင်ယာလန်နိုင်ငံလေစွမ်းအား | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏စာနယ်ဇင်းများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိနေရာအနှံ့အပြားတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာမကောင်းသောသတင်းများကိုဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ 2017 မှလေစွမ်းအင်နှင့်အတူဗြိတိန်ထောက်ပံ့ဗြိတိန်မှအိုင်ယာလန်.
ဒီထောက်ပံ့ရေးကြောင့်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် boggy မြေပြင်ပေါ်တွင်ကြီးမားသောလေစိုက်ခင်းတည်ဆောက်ခြင်း ကျွန်း၏ဗဟိုမှနှင့်အကယ်စင်စစ်ဗြိတိန်အိုင်ယာလန်မှပိတ်ထားလိမ့်မည်ဟုငွေအမြောက်အမြားမှ။
ဤလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသစ်တွင်စုစုပေါင်းတာဘိုင် ၇၀၀ ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးယူကေသို့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်အထောက်အကူပြုမည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အိုင်ယာလန်တွင်သုံးစွဲသောစွမ်းအင်၏ ၄၀% သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှဖြစ်သည်.
ဤ "ထူးဆန်းသော" ပူးပေါင်းမှုမှာအဓိကအားဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်နိုင်ငံသားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထက်စွမ်းအင်ပိုမိုထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်မှစွမ်းအင်။
ဒီနေ့ အိုင်ယာလန်တွင်သုံးစွဲသောစွမ်းအင်၏ ၁၈% သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှဖြစ်သည်၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၄၀ ရာနှုန်းအထိတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုအိုင်ယာလန်ဆက်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ် ၀ န်ကြီး Rabbitte ကပြောကြားခဲ့သည်။
အချို့သောအိုင်ယာလန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များကစီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်။ ၎င်းသည် "ရှုခင်းကိုအပျက်သဘောပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်" ဟုဆိုသော်လည်း၊ အိုင်ယာလန်နှင့်ဗြိတိသျှအစိုးရများသည်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန်နှင့်တရားစီရင်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလုပ်အကိုင်အသစ်များကိုဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်ဟုဆိုသည်။
ဒါဟာဆက်ဆက်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ဝေးလံခေါင်သီသောမဝေးသောအနာဂတ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောနိုင်ငံများသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှတစ်ဆင့်သူတို့၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးအခြားသူများအား၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်ကြိုးစားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - အဆောက်အ ဦး - ဘက်ပေါင်းစုံ photovoltaics ဆက်လက်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်
ရင်းမြစ် - ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ-စွမ်းအင်.com
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » လေစွမ်းအင် » ဗြိတိန်သို့လေစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရန်အိုင်ယာလန်